दक्षिण कोरियामा सधैका लागि अस्ताए एक नेपाली कामदार ! मनमा अलिकति दया भए [R.I.P] लेख्नुहोस – Media News Khabar
दक्षिण कोरियामा सधैका लागि अस्ताए एक नेपाली कामदार ! मनमा अलिकति दया भए [R.I.P] लेख्नुहोस
दक्षिण कोरियामा औद्योगिक दुर्घटनामा परी एक नेपालीको ज्यान गएको छ। ******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********बागलुङ जिल्ला गलकोट नगरपालिका–११ घर भई हाल कोरियाको थेगु शहरस्थित एक राइसमिल कम्पनीमा कार्यरत ४५ वर्षीय जयराम भनिने अशोक श्रीषमगरको दुर्घटनामा परी गत सोमबार मृत्यु भएको हो। ******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
घटनालाई नेपाल मगर सङ्घ दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष टेक पुनले पुष्टि गरेका छन्। दुई वर्षअघि कोरिया आएका अशोक कम्पनीमा काम गर्ने क्रममा सोमबार साँझ करिब ६ बजे लडेका थिए। ******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस******** लडेपछि बेहोस भएका उनलाई नजिककै अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। उनलाई अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो। ******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********हाल उनको शवलाई कोरियाली प्रहरीले स्थानीय अस्पतालमा राखेको छ।
मृतकका परिवारलाई खबर गरिएको नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष पुनले बताए। ******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस******** अन्य समाचार दशा आफुलाइ जतिसुकै सबारे पनि, आफ्नो नामको अगाडी-पछाडी जतिसुकै बिशेषणहरु जोडेपनि,जस्तोसुकै सुविधा संग जिवन बिताए पनि,सत्यको दुर्गन्धले सधै पछ्छाई राख्ने छ त्यो हो हामी संसारको कंगालतम् देशहरु मध्यको एक देशका नागरीक हौ। कारण के हुन सक्ला? के हामी तिक रुपमा मात्र गरिब छौ? यी प्रश्नहरु ******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
आज हाम्रो समाजले आत्म समालोचना गर्नको लागी सोध्नु पर्ने भएकोछ। हाम्रा पहाडका नदीनालाहरु, सारा देशलाई उज्यालो पारेर, सबलाई खाना पकाई खुबाएर, घरघरमा यातायात पुगाएर, हरेक घरमा आधुनिक मशिनहरु चलाइ दिएर, भारतबाट बिदेशी मन्द्रा आर्जन गर्न सक्ने क्षमताबान छन; तर हामीसंग बिजुलि निकाल्ने बिध्या छैन; हामी त्यसैले गरीब छौ।
Previous साउदी अरेवियाको ४ कम्पनिको लागी बिभिन्न पोष्ट हरुमा नेपली कामदारको माग !! साधारण लेखपढ जानेका हरुलाईको लागि के काम तलब कति भन्ने बारे सम्पुर्ण जानकारी
Next भीम रावललाई ओलीले संसदीय दलको नेता बनाउने आश्वासन दिएको खुलासा, अब एक बर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने सपना अब